GAROOWE, Puntland- Madaxweynaha Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, ayaa maanta u dhoofay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia, halkaasoo uu sheegay inuu ku leeyahay kulan muhiim ah oo amniga gobolku ugu horeeyo.
Socdaalka waxaa Madaxweyne Gaas ku weheliyay xubno katirsan shaqaalaha Madaxtooyada.
“Waxaan saaka u safraynaa aniga iyo weftigayguba magaalada Addis-Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia oo aan ku tegi doono socdaal muddo shan cisho ah oo ah safar shaqo, kaas oo aanu rabno inaanu dawladda Ethiopia kala soo xaajoono hawlo badan oo la xidhiidha dhanka Amniga, Ganacsiga iyo Siyaasadda guud ee Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba.” ayuu yiri Cabdiwali Gaas.
Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in isaga iyo weftigiisa kulamo la qaadan doonaan madaxda dalkaasi ugu saraysa, isla markaana ay kala xaajoon doonaan arrimo muhiim u ah gobolka.
“Waxaan is arki doonaa Madaxda ugu saraysa dalkaasi ‘INSHA ALLA’, waxaanna rajaynayaa inuu guul kusoo dhammaado safar-kayagu” ayuu hadalkiisa ku daray Madaxweynaha dawladda Puntland.
Maaha markii ugu horaysay safar noocaan ah uu Madaxweyne Gaas ku tago dalka Ethiopia, balse socdaalkan ayaa yimid maalmo kooban kadib markii uu kasoo laabtay magaalada Muqdisho oo uu uga qayb galay shirkii madaxda DFS iyo maamul goboleedyada.
Halkan ka Daawo Shir Jaraa'id oo Madaxweynaha Puntland ku qabtay Garoonka Diyaaradaha Kanooko
Puntland: Madaxweynaha oo aan ka hadlin xaaladda Boosaaso xilli uu Garoowe yimid
Puntland 01.12.2017. 23:22
Puntland: Gaas oo caawa ka dagay Garoowe
Puntland 18.01.2018. 20:37